ကမ္ဘာကြီး နောက် ၁၀နှစ်ကြာရင် ဘာတွေ ဖြစ်သွားမလဲ – Gentleman Magazine
ကမ္ဘာကြီး နောက် ၁၀နှစ်ကြာရင် ဘာတွေ ဖြစ်သွားမလဲ
Stratfor (Strategic Forecasting) ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ နောက် ၁၀ နှစ်ကြာရင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေးမှာ ဖြစ်လာမယ့် ပြောင်းလဲမှုတွေကို ခန့်မှန်းတင်ပြထားပါတယ်။
နောက် ၁၀ နှစ်ကြာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ခုထက်ပိုပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန် အင်အား နည်းသွားတာနဲ့အတူ အခြား အင်အားကြီးတိုင်းပြည်တွေဟာ မတည်ငြိမ်မှုနဲ့ ကပ်ဆိုးတွေကို ခံစားရမှာပါ။
၁. ရုရှား ပြိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်
တားမြစ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ ရေနံဈေး ကျဆင်းလာတာတွေ၊ စစ်အသုံးစရိတ် တိုးမြင့်တာတာ၊ စည်းလုံးမှု ပြိုကွဲလာတာတွေက မော်စကိုရဲ့ ရုရှားအပေါ် ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကို လျော့နည်းလာစေပါတယ်။ ရုရှားဟာ နိုင်ငံတွေအများကြီး ကွဲထွက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မော်စကိုက ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု လျော့နည်းလာတာနဲ့အမျှ အချင်းချင်းတောင် ပြန်ချနေကြတဲ့ ပြည်နယ်ငယ်လေးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြမှာပါ။
၂. ရုရှား Nuke တွေကို အမေရိကန်က စစ်အင်အားနဲ့ ဝင်ထိန်းရပါမယ်
ရုရှားက သူတို့ Nuke တွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ကျက်ထားတာပါ။ တကယ်လို့ ရုရှားပြိုလဲသွားရင် အဲဒိ Nuke တွေ၊ ယူရေနီယမ် သန့်စင်ပြီးသားတွေဟာ ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အရှိဆုံး ပါဝါ နေရာလပ်မှုကြီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ တစ်ခုထဲသော အင်အားဖြစ်တဲ့ ဝါရှင်တန်ကပဲ ထိန်းသိမ်းရပါမယ်။ ဒါတောင် အကုန်အုပ်မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၃. ဂျာမနီမှာ ပြသနာတွေ တက်လာပါလိမ့်မယ်
ဂျာမနီဟာ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းကို အဓိကထားပြီး ဥရောပတိုက်လုံး ပို့ကုန်အခွန်မကောက်ပဲ EU စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကတည်းက အကျိုးအမြတ်ရနေတာပါ။ EU ပြိုကွဲသွားရင်လဲ ဂျာမန်တွေပဲ အဆုံးရှုံးဆုံး ဖြစ်မှာပါ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်တွင်း စားသုံးမှုက ပို့ကုန်အပေါ်မှာ မကျော်လွန်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ ဂျပန်လိုမျိုး ဖွံ့ဖြိုးမှု ရပ်သွားမှာပါ။ နောက် ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ ဂျာမန်က စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်မှုကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
၄. ပိုလန်က ဥရောပရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာပါမယ်
စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုကို ပိုလန်က ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ပိုလန်ရဲ့ လူဦးရေဟာ တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေလို လျော့ကျမသွားပါဘူး။ ဥရောပအရှေ့စွန်းက အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်လဲ နိုင်ငံရေးဩဇာ လွှမ်းမိုးလာပါလိမ့်မယ်။
၅. EU လေးစုကွဲသွားပါလိမ့်မယ်
EU ဟာ အရမ်းညီညွတ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက် ၁၀ နှစ်မှာ EU ဟာ သမိုင်း ဖြစ်ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ EU ကို အရှေ့ဥရောပ၊ အနောက်ဥရောပ၊ စကင်ဒီနေဗီးယားနဲ့ ဗြိတိသျှ ကျွန်းတွေ ဆိုပြီး လေးစု ကွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ မိတ်ဆွေတွေတော့ ဖြစ်နေဦးမှာပါ။ အခုလောက်တော့ နီးစပ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၆. တူရကီနဲ့ US ဟာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ မဟာမိတ် ဖွဲ့ရပါလိမ့်မယ်
အာရပ်နိုင်ငံတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြိုလဲနေပြီး အဲဒါဟာ ရပ်တန့်လို့ မရနိုင်သေးပါဘူး။ အဲဒိအဖြစ်အပျက်ကနေ တူရကီက အကျိုးအမြတ် ရနေပါတယ်။ တူရကီဟာ သူတို့ နယ်စပ်တွေမှာ ပြသနာဖြစ်မှာကို ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အဲဒိအတွက် စစ်အင်အားအကူအညီဖို့ US နဲ့ မိတ်ဖွဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ တူရကီကလဲ US ကို ရုရှားကိစ္စအတွက် ကူညီပါလိမ့်မယ်။
၇. တရုတ်ဟာ ပြသနာ အကြီးကြီး ကြုံရပါလိမ့်မယ်
တရုတ်ဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု နှေးကွေးတဲ့ ခေတ်တစ်ခေတ်ကို ကြုံရမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် ကွန်မြုနစ်ပါတီကို ဆန့်ကျင်မှုတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံး တွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ပါတီက ဆန့်ကျင်မှုတွေကို အင်အားနဲ့ ဖိနှိပ်ထားမှာပါ။ တရုတ်ရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းမြို့တွေဟာ အလျင်အမြန်တိုးတက်နေပေမယ့် အတွင်းပိုင်း မြို့တွေကတော့ ခေတ်နောက်ကျနေပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံ ပြိုကွဲသွားနိုင်မဲ့ အန္တရာယ်ကို ဘေကျင်း ကြုံတွေ့ရမှာပါ။
၈. ဂျပန်ရေတပ်အင်အား ကြီးလာပါလိမ့်မယ်
ဂျပန်ဟာ ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်လို့ သွင်းကုန်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ တရုတ်က ရေတပ်အင်အားတိုးချဲ့လာတာနဲ့အညီ ဂျပန်ရဲ့ သွင်းကုန်လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာကို ထိန်းချုပ်လာပါလိမ့်မယ်။ အမေရကန်ပါဝါ ကျဆင်းနေတာကြောင့် ဂျပန်ဟာ သူတို့သွင်းကုန်လမ်းကြောင်းတွေကို သူတို့ဘာသာ ထိန်းသိမ်းရပါလိမ့်မယ်။
၉. တောင်တရုတ်ပင်လယ်က ကျွန်းတွေကြောင့် စစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်….
အနီးအနားက ပါဝါနိုင်ငံတွေဟာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကျွန်းတွေဟာ စစ်ရေးအရ မထိုက်တန်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒိနေရာမှာ ပါဝါပြမှုတွေကတော့ ဖြစ်နေမှာပါ။ တကယ် အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေဟာ အရှေ့အာရှဘက်မှာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
၁၀. တရုတ်နိုင်ငံ အငယ်စားလေး ဆယ့်ခြောက်နိုင်ငံ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်
တရုတ် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု လျော့ပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လျော့ကျလာတာနဲ့အတူ တရုတ် လုပ်နေကျ စက်မှုလုပ်ငန်း အငယ်စားတွေဟာ စုစုပေါင်းလူဦးရေ သန်း ၁၁၅၀ ရှိတဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်လာတဲ့ နိုင်ငံ ၁၆ နိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့လာပါလိမ့်မယ်။ မက်ဆီကို၊ နီကာရာဂွာ၊ ဒိုမီနီကန်၊ ပီရူး၊ အီသီယိုးပီးရား၊ ယူဂန်ဒါ၊ ကင်ညာ၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မြန်မာ၊ သီရိလင်္ကာ၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတို့ဟာ အလုပ်အကိုင်တွေ ရောက်လာတာနဲ့အတူ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေ နောက် ဆယ်စုနှစ်မှာ တွေ့လာရမှာပါ။
၁၁. US ပါဝါ လျော့ကျသွားပါမယ်
ကမ္ဘာကြီးဟာ နောက် ၁၀ နှစ်မှာ ပြသနာတွေ ရှုပ်ထွေးလာတာနဲ့ US ဟာ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ ခေါင်းဆောင်မလုပ်တော့ပဲ သူ ကြိုက်တဲ့ ပြသနာတွေကိုပဲ ရွေးချယ်ရှင်းတော့မှာပါ။ စီးပွားရေးတိုးတက်နေမှု၊ စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်နိုင်မှု၊ ပို့ကုန် မပို့ပဲနေနိုင်မှုနဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အလုံခြုံဆုံးနေရာမှာ ရှိမှုတို့တွေဟာ US ကို ကမ္ဘာ့ပြသနာတွေကနေ ကာကွယ်ပေးထားမှာပါ။
ကမ်ဘာကွီး နောကျ ၁၀နှဈကွာရငျ ဘာတှေ ဖွဈသှားမလဲ
Stratfor (Strategic Forecasting) ဆိုတဲ့ ကိုယျပိုငျ ထောကျလှမျးရေး အဖှဲ့အစညျးတဈခုဟာ နောကျ ၁၀ နှဈကွာရငျ ကမ်ဘာ့နိုငျငံရေးနဲ့ စီးပှားရေးမှာ ဖွဈလာမယျ့ ပွောငျးလဲမှုတှကေို ခနျ့မှနျးတငျပွထားပါတယျ။
နောကျ ၁၀ နှဈကွာ ကမ်ဘာကွီးဟာ ခုထကျပိုပွီး ကွောကျစရာကောငျးတဲ့နရော ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ အမရေိကနျ အငျအား နညျးသှားတာနဲ့အတူ အခွား အငျအားကွီးတိုငျးပွညျတှဟော မတညျငွိမျမှုနဲ့ ကပျဆိုးတှကေို ခံစားရမှာပါ။
၁. ရုရှား ပွိုလဲသှားပါလိမျ့မယျ
တားမွဈပိတျဆို့မှုတှေ၊ ရနေံစြေး ကဆြငျးလာတာတှေ၊ စဈအသုံးစရိတျ တိုးမွငျ့တာတာ၊ စညျးလုံးမှု ပွိုကှဲလာတာတှကေ မျောစကိုရဲ့ ရုရှားအပျေါ ထိနျးခြုပျနိုငျမှုကို လြော့နညျးလာစပေါတယျ။ ရုရှားဟာ နိုငျငံတှအေမြားကွီး ကှဲထှကျသှားမှာ မဟုတျပါဘူး။ မျောစကိုက ထိနျးသိမျးနိုငျမှု လြော့နညျးလာတာနဲ့အမြှ အခငျြးခငျြးတောငျ ပွနျခနြကွေတဲ့ ပွညျနယျငယျလေးတှေ ဖွဈကုနျကွမှာပါ။
၂. ရုရှား Nuke တှကေို အမရေိကနျက စဈအငျအားနဲ့ ဝငျထိနျးရပါမယျ
ရုရှားက သူတို့ Nuke တှကေို တဈနိုငျငံလုံးဖွနျ့ကကျြထားတာပါ။ တကယျလို့ ရုရှားပွိုလဲသှားရငျ အဲဒိ Nuke တှေ၊ ယူရနေီယမျ သနျ့စငျပွီးသားတှဟော ကမ်ဘာ့အန်တရာယျအရှိဆုံး ပါဝါ နရောလပျမှုကွီး ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။ အဲဒါတှကေို ထိနျးသိမျးနိုငျတဲ့ တဈခုထဲသော အငျအားဖွဈတဲ့ ဝါရှငျတနျကပဲ ထိနျးသိမျးရပါမယျ။ ဒါတောငျ အကုနျအုပျမိမှာ မဟုတျပါဘူး။
၃. ဂြာမနီမှာ ပွသနာတှေ တကျလာပါလိမျ့မယျ
ဂြာမနီဟာ ပို့ကုနျလုပျငနျးကို အဓိကထားပွီး ဥရောပတိုကျလုံး ပို့ကုနျအခှနျမကောကျပဲ EU စတငျဖှဲ့စညျးလိုကျကတညျးက အကြိုးအမွတျရနတောပါ။ EU ပွိုကှဲသှားရငျလဲ ဂြာမနျတှပေဲ အဆုံးရှုံးဆုံး ဖွဈမှာပါ။ တိုငျးပွညျရဲ့ ပွညျတှငျး စားသုံးမှုက ပို့ကုနျအပျေါမှာ မကြျောလှနျပါဘူး။ နောကျဆုံးမှာ ဂပြနျလိုမြိုး ဖှံ့ဖွိုးမှု ရပျသှားမှာပါ။ နောကျ ဆယျစုနှဈအတှငျးမှာ ဂြာမနျက စီးပှားရေးကပျဆိုကျမှုကို ခံစားရနိုငျပါတယျ။
၄. ပိုလနျက ဥရောပရဲ့ ခေါငျးဆောငျ ဖွဈလာပါမယျ
စီးပှားရေးတိုးတကျမှုနဲ့ နိုငျငံရေးလှမျးမိုးမှုကို ပိုလနျက ရရှိလာပါလိမျ့မယျ။ ပိုလနျရဲ့ လူဦးရဟော တခွားဥရောပနိုငျငံတှလေို လြော့ကမြသှားပါဘူး။ ဥရောပအရှစှေ့နျးက အကွီးဆုံးနိုငျငံဖွဈတာကွောငျ့လဲ နိုငျငံရေးဩဇာ လှမျးမိုးလာပါလိမျ့မယျ။
၅. EU လေးစုကှဲသှားပါလိမျ့မယျ
EU ဟာ အရမျးညီညှတျနတော မဟုတျပါဘူး။ နောကျ ၁၀ နှဈမှာ EU ဟာ သမိုငျး ဖွဈကနျြခဲ့နိုငျပါတယျ။ EU ကို အရှေ့ဥရောပ၊ အနောကျဥရောပ၊ စကငျဒီနဗေီးယားနဲ့ ဗွိတိသြှ ကြှနျးတှေ ဆိုပွီး လေးစု ကှဲသှားပါလိမျ့မယျ။ သူတို့ဟာ မိတျဆှတှေတေော့ ဖွဈနဦေးမှာပါ။ အခုလောကျတော့ နီးစပျနမှော မဟုတျပါဘူး။
၆. တူရကီနဲ့ US ဟာ ထငျမှတျမထားတဲ့ မဟာမိတျ ဖှဲ့ရပါလိမျ့မယျ
အာရပျနိုငျငံတှေ တဈခုပွီးတဈခု ပွိုလဲနပွေီး အဲဒါဟာ ရပျတနျ့လို့ မရနိုငျသေးပါဘူး။ အဲဒိအဖွဈအပကျြကနေ တူရကီက အကြိုးအမွတျ ရနပေါတယျ။ တူရကီဟာ သူတို့ နယျစပျတှမှော ပွသနာဖွဈမှာကို ရှောငျလှဲလို့ မရနိုငျပါဘူး။ အဲဒိအတှကျ စဈအငျအားအကူအညီဖို့ US နဲ့ မိတျဖှဲ့ရပါလိမျ့မယျ။ တူရကီကလဲ US ကို ရုရှားကိစ်စအတှကျ ကူညီပါလိမျ့မယျ။
၇. တရုတျဟာ ပွသနာ အကွီးကွီး ကွုံရပါလိမျ့မယျ
တရုတျဟာ စီးပှားရေးတိုးတကျမှု နှေးကှေးတဲ့ ခတျေတဈခတျေကို ကွုံရမှာပါ။ အဲဒါကွောငျ့ ကှနျမွုနဈပါတီကို ဆနျ့ကငျြမှုတှကေို တဈနိုငျငံလုံး တှရေ့မှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ပါတီက ဆနျ့ကငျြမှုတှကေို အငျအားနဲ့ ဖိနှိပျထားမှာပါ။ တရုတျရဲ့ ကမျးရိုးတနျးမွို့တှဟော အလငျြအမွနျတိုးတကျနပေမေယျ့ အတှငျးပိုငျး မွို့တှကေတော့ ခတျေနောကျကနြပေါသေးတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ နိုငျငံ ပွိုကှဲသှားနိုငျမဲ့ အန်တရာယျကို ဘကေငျြး ကွုံတှရေ့မှာပါ။
၈. ဂပြနျရတေပျအငျအား ကွီးလာပါလိမျ့မယျ
ဂပြနျဟာ ကြှနျးနိုငျငံဖွဈလို့ သှငျးကုနျတှေ လိုအပျပါတယျ။ တရုတျက ရတေပျအငျအားတိုးခြဲ့လာတာနဲ့အညီ ဂပြနျရဲ့ သှငျးကုနျလမျးကွောငျးတှဖွေဈတဲ့ တရုတျပငျလယျပွငျနဲ့ အိန်ဒိယ သမုဒ်ဒရာကို ထိနျးခြုပျလာပါလိမျ့မယျ။ အမရေကနျပါဝါ ကဆြငျးနတောကွောငျ့ ဂပြနျဟာ သူတို့သှငျးကုနျလမျးကွောငျးတှကေို သူတို့ဘာသာ ထိနျးသိမျးရပါလိမျ့မယျ။
၉. တောငျတရုတျပငျလယျက ကြှနျးတှကွေောငျ့ စဈမဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့….
အနီးအနားက ပါဝါနိုငျငံတှဟော တောငျတရုတျပငျလယျကြှနျးတှဟော စဈရေးအရ မထိုကျတနျဘူးလို့ သတျမှတျကွပါလိမျ့မယျ။ အဲဒိနရောမှာ ပါဝါပွမှုတှကေတော့ ဖွဈနမှောပါ။ တကယျ အရေးကွီးတဲ့ နရောတှဟော အရှအေ့ာရှဘကျမှာ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
၁၀. တရုတျနိုငျငံ အငယျစားလေး ဆယျ့ခွောကျနိုငျငံ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ
တရုတျ စီးပှားရေးတိုးတကျမှု လြော့ပွီး ကုနျထုတျလုပျမှု လြော့ကလြာတာနဲ့အတူ တရုတျ လုပျနကြေ စကျမှုလုပျငနျး အငယျစားတှဟော စုစုပေါငျးလူဦးရေ သနျး ၁၁၅၀ ရှိတဲ့ စီးပှားရေးတိုးတကျလာတဲ့ နိုငျငံ ၁၆ နိုငျငံကို ပွောငျးရှလေ့ာပါလိမျ့မယျ။ မကျဆီကို၊ နီကာရာဂှာ၊ ဒိုမီနီကနျ၊ ပီရူး၊ အီသီယိုးပီးရား၊ ယူဂနျဒါ၊ ကငျညာ၊ တနျဇနျးနီးယား၊ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့၊ မွနျမာ၊ သီရိလင်ျကာ၊ လာအို၊ ဗီယကျနမျ၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ ဖိလဈပိုငျနဲ့ အငျဒိုနီးရှားတို့ဟာ အလုပျအကိုငျတှေ ရောကျလာတာနဲ့အတူ စီးပှားရေးတိုးတကျမှုတှေ နောကျ ဆယျစုနှဈမှာ တှလေ့ာရမှာပါ။
၁၁. US ပါဝါ လြော့ကသြှားပါမယျ
ကမ်ဘာကွီးဟာ နောကျ ၁၀ နှဈမှာ ပွသနာတှေ ရှုပျထှေးလာတာနဲ့ US ဟာ ပွသနာတှကေို ဖွရှေငျးရာမှာ ခေါငျးဆောငျမလုပျတော့ပဲ သူ ကွိုကျတဲ့ ပွသနာတှကေိုပဲ ရှေးခယျြရှငျးတော့မှာပါ။ စီးပှားရေးတိုးတကျနမှေု၊ စှမျးအငျ ထုတျလုပျနိုငျမှု၊ ပို့ကုနျ မပို့ပဲနနေိုငျမှုနဲ့ ကမ်ဘာကွီးရဲ့ အလုံခွုံဆုံးနရောမှာ ရှိမှုတို့တှဟော US ကို ကမ်ဘာ့ပွသနာတှကေနေ ကာကှယျပေးထားမှာပါ။
Previous: ကမ္ဘာ့အထင်ရှားဆုံး ဓာတ်လှေကား ၁၀ စင်း
Next: ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံး ဆိုင်ကယ် ၁၀ စင်း